Shiinaha Mashiinka Bulaacadda Lagu Quusin Karo （> 30Kw） soosaarayaasha iyo alaableyda | KAIQUAN
Qulqulka: 120-12000m3 / saacaddii
Madaxa: Ilaa 86m
WQ (30kw +) Taxanaha Mashiinka Bulaacadda
WQ (P ≥30kW) Faa'iidooyinka Mashiinka Quusin Kara iyo Astaamaha
1.Biinka biyaha ee caqliga badan, kormeerka fog ee daruuraha
Bamgaree dareemaha gariirka isku dhafan ee gudaha, kormeerka wareega oo dhan ee hawlgalka bamka, oo wuxuu noqon karaa muujinta waqtiga-dhabta ah ee xogta iyada oo loo marayo golaha xakamaynta caqliga, qaylo-dhaanta ama joojinta hawlgalka otomaatiga ah. Isla mar ahaantaana, hawlgalka kormeerka fog iyo mashiinka dayactirka ee Shanghai kaiquan caqli leh daruuraha ayaa lagu gali karaa kormeerka iyo hawlgalka iyo hawlgalka dayactirka.
2. Naqshadeynta naqshad-darrada aan-dheellitirka ahayn, tikniyoolajiyad casri ah oo ku saabsan bamka daaweynta bullaacadaha, fikradda naqshadeynta hal-abuurka ah ee qaab-dhismeedka hidda-sare ee aan culeyska badan saarin, iyo sidoo kale naqshadeynta awoodda bamka bullaacadaha.
Naqshadaynta naqshadeynta bamka asalka ah, hubi in bamka mashiinka hawlgalka lagu kalsoonaan karo muddada-dheer yahay si loo hubiyo in daloolka stator uusan biyo dhaawicin matoorka.
Xirmada farsamada 4.Excellent
Borgmann shaybaar farsamaysan oo la soo dhoofiyay waa la qaatay, walxaha madaxa mashiinka mashiinka loo yaqaan 'silicon carbide' ee loo yaqaan 'tungsten carbide', oo bixiya caabbinta ugu badan ee dharka, iyo nolosha adeegga naqshadeynta mashiinka madaxa mashiinka waa 15000 saacadood Farsamada farsamada is-nadiifinta. shaabadaha ayaa lagu rakibay taxane ah.
Hore: Saarida wasakhda wasakhda （11-22Kw）
Xiga: 2BEK Vacuum saar
WQ (P≥30kW) Sharaxaadda mashiinka quusin kara ee taxanaha ah
WQ (30kW iyo wixii ka sareeya) Jaantuska Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka iyo Sharaxaada